> Resource > Video > Sida loo kala sooco Audio ka Video
Ma doonaysaa in ay kala audio iyo track video clip video in si aad u hesho file music keliya? Ama waxaad u baahan inaad ku darto file maqal ah oo kale si ay u video qaab dhismeedka asalka ah? In tutorial this, waxaad ka heli doontaa sida ay u fududahay waa in aan kala tagno audio ka video si ay u sameeyaan MP3s kuu gaar ah. Markaasuu wax waa a music video, TV show, ama riwaayad video, waxa aad sameyn kartaa adiga kuu gaar ah file MP3 waslad fantastic ah music Raaxo on go ah. La yaabka leh, miyaanay ahayn? Halkan waxa aad ka tagaan.
Qalab aad u baahan doontaa: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Download maxkamadda free hoos ku qoran.
1 shuban aad files warbaahinta
Orod this separator audio, dooran 16: 9 ama 4: 3 ratio sida baahidaada inay galaan suuqa kala hoose. Markaas riix Import ku darto videos, audio iyo sawiro ka folder file aad kombiyuutarka. Ogsoonow in barnaamijkan uu yahay mid aad u la jaan qaada qaabab kala duwan, si aad u sii wadi karaan tayada asalka ahaa marka iyaga sixiddiisa jir by jir.
Ka dib marka aad soo dhoofsadaan videos, jiididda iyo iyaga hoos u Timeline Video ah. By default, dhammaan faylasha ku Video Jadwalka waa la soo wada biireen maqnaan doona stop kasta.
2 audio Kala video in click ah
Hadda xaq guji file video aad rabto in aad soo saaro track audio ah, iyo dooro "Audio jari lahaayeen". Isla markiiba, aad ka ogaan doonto file maqal ah oo u muuqata in Timeline Music ah. Haa, taasi waa file asalka audio aad u baahan tahay. Double waxa guji si Dhagaysta hadda.
Hadda aad kala go'deen wadada audio ka file video si guul leh. Ma doonaysaa in aad ku darto file maqal ah oo kale, waxa uu? Haa, waa caadi ah in aad ku darto edbinta ama Sheeko aad video duubay si aad isu sii cad, ama qaar ka mid ah wax lagu qoslo in ay wadaagaan qoyska ama saaxiibbada la abuuro. Si tan loo sameeyo, wuxuu kuu diri karaa si aad faahfaahin dheeraad ah ka tutorial this: Sida loo dar music music / jeeda in video.
3 Save the video ka soo soocay ama maqal ah
Tan iyo track audio iyo video ayaa la soo bandhigay in Timeline goonida ah, si fudud u tirtirto wadada audio ama video aad uma baahna. Markaasuu ku dhacay "Dhoofinta" si loo badbaadiyo wadada audio file a in MP3 cusub, ama si toos ah u dooro "iPod" horena u ciyaaro on go ah.
Talo : Haddii aad rabto in aad sii jir kala video ama track audio gaar ah file cusub, waxaad u baahan doontaa in aad marka hore badbaadin file mashruuc ku wadid aad u adag. Marka aad buuxiso dhoofinta track audio, Reload file mashruuca ay ku jiraan video jir ah, ka dibna waxa ay u dhoofiyaan si faylka video cusub.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), in ay casriyayn ugu danbeeyay, ku darayaa set oo ah muuqaalada tafatirka gaar ah oo lagu qoslo in xitaa barnaamijyada tafatirka ugu qaalisan ma taageeraan. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah samaynta Jump yaree ee isbedel goobta, la abuuro jir ah la qaboojiyey in la muujiyo xilligan ugu farxada badan sheekada, codsanaya Janjeeri-wareejin si ay u sameeyaan Ghadafi ah & samayso mid kuu gaar yar video adduunka! Download hoos ku maxkamad lacag la'aan ah si ay u abuuraan aad masterpiece gaar ah hadda!